Daadadka ayaa halis gelin doona malaayiin qof 25 sano gudahood | Saadaasha Shabakadda
Daadadku waa astaamaha saadaasha hawada oo ay tahay inaan ula qabsanno. Sida laga soo xigtay daraasad lagu daabacay joornaalka Sayniska Horumarinta, wuxuu noqon karaa mid waxyeello geysta 25-ka sano ee soo socda iyada oo ay sabab u tahay kuleylka adduunka.
Markay heerkulku kaco, oo mooyee da'da 'Ice Ice Mini' dhab ahaan aysan dhicin, waxaa isbeddelaya qaababka roobka ee adduunka.
Roobabka sida caadiga ah waa la soo dhaweynayaa, laakiin markay ku soo dhacaan qaab duufaanno leh waxay sababi karaan dhibaatooyin fara badan, oo aan ka ahayn kaliya geedaha dhacaya iyo dhul-go'idda, laakiin sidoo kale waxay dili karaan dad badan. Sidaas darteed, waa muhiim in la ogaado gobolada ugu nugul, taasi waa, kuwa ay lagama maarmaan u tahay in la qaado tallaabooyin ilaalin ah. Si loo go'aamiyo iyaga, cilmi-baarayaashu waxay u ekeeyeen isbeddelada moodooyinka cimilada iyo biyo-biyoodka heer caalami ee la xiriira kororka heerkulka, iyagoo tixgelinaya sida ay hadda u kala yihiin dadka.
Sidaa darteed, way ogaan karaan taas inta badan Mareykanka, Bartamaha Yurub, Waqooyiga iyo Galbeedka Afrika, iyo sidoo kale Hindiya iyo Indooniisiya ayaa ka mid noqon lahaa meelaha ugu daran ee ay dhibaatadu saameysey daadadka 25ka sano ee soo socda.
Haddii aan la qaadin tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, malaayiin qof ayaa halis weyn ku jira. Shiinaha oo keliya, illaa 55 milyan oo qof ayaa la kulmi doona dhacdooyinkan ba'an; Waqooyiga Ameerikana waxay uga gudbi doonaan hadda 100.000 illaa hal milyan. Nasiib darrose, iyo sida had iyo jeer dhacdooyinkan oo kale ka dhaca, waddamada soo koraya, iyo sidoo kale xarumaha magaalooyinka ee leh cufnaanta tirada dadka, ayaa noqon doona kuwa dhibaatada ugu badan ka haysato ilaalinta dadkooda.
Tan waa in lagu daraa, xitaa haddii qiiqa kaarboon laba ogsaydhka, oo ka mid ah kuwa masuulka ka ah kululaynta adduunka, la dhimi karo, waxba lagama qaban karo si looga hortago inay taasi dhacdo.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waad sameyn kartaa halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka » Daadadka ayaa halis gelin doona malaayiin qof 25 sano gudahood
Khaladaadka waxbarashada ee ku saabsan isbedelka cimilada